» को बन्छ नेपाल आईडल ?
को बन्छ नेपाल आईडल ?
२१ श्रावण २०७७, बुधबार ११:५१
चन्द्र घलान,मकवानपुर, २१ साउन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ फेरि सुरु हुने भएको छ । उत्कृष्ट ४ छनौटका क्रममा विश्वमहामारीका कारण स्थगित भएको शो यही बिहिबारदेखि फेरि प्रसारण हुन थालेको हो । शो पून सुचारु हुनेबारे ट्रेलरसमेत सहभागी भएपछि केही समय सेलाएको नेपाल आईडलको चर्चा फेरि सुरु भएको छ । स्थगित हुनुअघि उत्कृष्ट ४ जना प्रतियोगीहरु छानिसकिएको थियो जसमा सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल, केविन ग्लान तामाङ र नेशन पुन मगर रहेका छन् । त्यस्तै प्रतियोगितामा वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि रचना रिमाल, ममता गुरुङ, मिग्मा लामा, किरण कुमार भुजेल र मेघा श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनीहरुको रिजल्ट पनि यही हप्ता हुने आसा गरिएको छ । वाईल्ड कार्डबाट कसले जित्नसक्छ भन्ने विषयमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ । यस भिडियोमा भने हामी उत्कृष्ट ४ भित्र परेका प्रतियोगीहरुमध्ये नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता बन्ने सम्भावना कसको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारका रुपमा उभिएका यी चारै जना प्रतियोगीहरु एकसाएक छन् । उनीहरुमध्ये कुनै एक जना प्रतियोगी नेपाल आईडल बन्दा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन तर चारै जनाका केही खास कुराहरु पनि छन् जसले उनीहरु ४ जनालाई एकअर्काबाट बिल्कुलै फरक बनाउँछ । त्यतिमात्र नभई वाईल्डकार्डबाट कसले ईन्ट्री पाउँछ भन्ने कुराले पनि यी ४ जनाको नेपाल आईडल जित्ने सम्भावनालाई कुनै न कुनै रुपमा असर पार्ने देखिन्छ । आईडल दाबेदारका रुपमा उभिएकी सज्जा चौँलागाई पहिलो महिला नेपाल आईडल बन्नसक्ने अवस्था पनि छ । अनि धेरै श्रोता दर्शकको पनि साथ उनलाई छ । हालैका दिनमा बजारमा आएको उनका नयाँ गीतहरुले पनि उनी गायनकलामा कति सम्भावना बोक्छिन् भन्ने कुरालाई थप उजागर गरिदिएको छ । उनका गीतहरु अहिले हिट भएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
नेपाल आईडलमा सर्वाधिक अवार्ड जितेकी सज्जाले गाला राउण्डको नवौँ हप्तासम्ममा ११ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । सज्जाले ४ वटा रेक्सपेक्ट पर्फोमेन्स अवार्ड, २ वटा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड, ५ वटा अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । नेपाल आईडलमा रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जा मोरङ निवासी हुन् । उनी २२ वर्षकी छिन् । अहिले काठमाठौँ नारायणटारमा बसोबास गर्दै आएकी सज्जा साँगितिक दुनियाँमा बिगत ६ वर्षदेखि सक्रिय छिन् । सानै छँदा गीत गुनगुनाउने सज्जाले विद्यालयमा विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिँदै गायन कला तिखारेकी हुन् । संगीतमा कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएकी सज्जाले प्लस टु अध्ययनका क्रममा विभिन्न स्थानमा स्टेज सिंगरको रुपमा पनि काम गरेकी थिईन् । आमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा साईप्रास गएपछि सज्जाले भाईको जिम्मेवारी समेत बहन गर्दै आएकी छिन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन समेत दिएर बसेकी सज्जा एसएलसी पश्चात नै ब्याण्डमा जोडिएकी थिईन् । उनी ‘द लोडिङ ब्याण्ड’ मा आवद्ध छिन् । स्कुल, कलेज र स्टेज सिंगर हुँदै नेपाल आईडलको मञ्चमा पुगेकी सज्जाले निरन्तर संगीत क्षेत्रमा लाग्ने सोच बनाएकी छिन् ।
त्यस्तै नेपाल आईडलको दाबेदारीमा कडा टक्कर दिने अर्का प्रतियोगी हुन् प्रविण बेड्वाल । नेपाल आईडलको स्टेजमा संगीतका उस्ताद भनेर चिनिएका प्रविणको सामाजिक कार्य र सांगितिक यात्रालाई पनि दर्शक श्रोताले नजिकबाट नियालेका छन् । दर्शकहरुले उनलाई नेपाल आईडल बनाउनुपर्ने कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट र कमेन्टहरु पनि गरिरहेका छन् । हालै बजारमा आएका उनका गीतहरुले पनि निक्कै चर्चा पाउन सफल भएको छ । प्रविणले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म ८ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ६ वटा अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र २ वटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स आफ द विक अवार्ड जितेका छन् । उनले एकपटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरेका छन् । बर्दिया निवासी प्रविण बेड्वाल नेपाल आईडल सिजन ३ मा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिने प्रतियोगीहरुमध्येका एक हुन् ।
प्रविण नेपाल आईडल सिजन ३ मा सुमधुर आवाजका कारण चिनिएका छन् । उनी २३ वर्षका छन् । बुटवल अडिसनबाट छनौट हुँदै उत्कृष्ट ४ को यात्रा तय गरेका प्रविणले सँगीत विषयमा नै स्नातक गरेका छन् । सुरुसुरुमा आफु गायन क्षेत्रमा लाग्दा परिवारको त्यति साथ नपाएता पनि संगीतमा उनको रुचि झनझन बढ्दै गयो । अरुले त्यति साथ नदिएपनि उनलाई उनको हजुरआमाले हौसला दिएको उनी सम्झन्छन् । कक्षा १० सम्म गाउँमा नै अध्ययन गरेका प्रविणले त्यसपछि काठमाडौँको बसाई सुरु गरे । काठमाडौँ आएर त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका प्रविण पछि संगीत विषयमा नै अध्ययन गर्नका लागि भन्दै भारतको तमिलनाडुमा पुगे । त्यहाँबाट नै उनले संगीतमा स्नातक गरेका हुन् । स्नातक पश्चात ‘जात्रा’ नामक ब्याण्डमा आवद्ध भएका उनले संगीतको शिखरमा थप प्रगति गर्न थाले । सुरुमा रिझाउन नसकिएको परिवारले पनि अहिले उनलाई साथ दिन थालेका छन् । वास्तवमा प्रविणका बुवा आर्मीमा थिए । आफ्नो छोरालाई पनि आर्मी बनाउने सपना देखेका बुवाको ईच्छाविपरित प्रविणले संगीतको बाटो समातेका थिए । संगीतलाई छनौट गर्दै घर छाडेका प्रविण संगित क्षेत्रमा लागेको उनको परिवारलाई सुरुमा राम्रो लागेको थिएन । तर अहिले उनका बुवा पनि खुशी छन् । प्रविणले संगीत क्षेत्रमै लागिरहने अठोट गरेका छन् ।
प्रतियोगिताका अर्का दाबेदार केविन ग्लान तामाङलाई मन पराउने श्रोता र दर्शकहरुको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ । युनिक भ्वाईस र सरल व्यक्तित्व भएका केविन नै नेपाल आईडलको तेस्रो विजेता भएको हेर्न चाहाने दर्शकहरुले उनको प्रशंसा गरिरहेका छन् । सानैदेखि संगीतमा लागेर खारिएका केविनले नेपाल आईडलको उपाधि जित्ने सम्भावना पनि निक्कै धेरै छ । केविनले नेपाल आईडल सिजन ३ मा अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिनले ४ वटा अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे, २ वटा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड र एउटा रेक्सपेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । उनले २ पटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । यसबाट पनि दर्शकको रोजाईमा उनी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल आईडल सिजन ३ मा दमदार प्रस्तुकितका कारण चर्चामा रहेका केविन चितवनको पर्सा निवासी हुन् । उनी २१ वर्षका छन् । सानैमा आफ्ना दाजुहरुले गीतार बजाएको देखेर केविन संगीतमा आकर्षित भएका हुन् । पढाई र सँगीतलाई सँगै अगाडि बढाएका केबिनलाई १४ वर्षको उमेरमा बुवाले उपहार दिनुभएको गीतारले संगीत क्षेत्रमा थप प्रगति गर्न हौस्यायो । गायक स्वप्निल शर्मालाई आईडल मान्ने केबिन स्याडोज ब्याण्डको ठूलो फ्यान हुन् । सुरुमा गीत गाउन लजाउने केविन गितार भने निकै राम्रो बजाउने गर्थे । उनले सँगीतको यात्राकै क्रममा ‘शास्त्र’ नामक ब्याण्ड जोईन गरे । त्यस ब्याण्डमा केही वर्ष बिताएका केबिन र उनको टिमले पछि अक्टेब ब्याण्ड स्थापना गर्यो । उनी गत ५ वर्षदेखि सोही ब्याण्डमा आवद्ध छन् । म्युजिकलाई आफ्नो प्यासन बताउने उनी सोही प्यासनलाई करियरका रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छन् । एक महिना मात्र औपचारिक संगीत सिकेका केविन संगीतलाई मानिसको मनसम्म जोडिएको भावना व्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा परिभाषित गर्छन् । उनले सन् २०१७ तिर एउटा गीत समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रतियोगिताका अर्का दाबेदार नेशन पुन मगरलाई दर्शक श्रोताले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएका छन् । लकडाउनका समयमा पोखराको चोक चोकमा राहत बाँड्दै हिँडेका नेशनले दर्शक श्रोताको मनमा आफुलाई सांगितिक हिरो मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि असल हिरो सावित गरेका छन् । नेपाल आईडलको विशेष एपिसोडहरुमा उनले प्रस्तुत गरेको गीतले पनि उनलाई नेपाल आईडलको दाबेदार हुन थप टेवा पुराएको छ । दर्शक श्रोताहरु उनलाई नेपाल आईडल भएको हेर्न चाहान्छन् । नेशनले आईडलको तेस्रो सिजनमा अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले २ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड, ४ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । उनले पनि दुई पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका छन् । म्याग्दीका नेशन पुन मगर २० वर्षका छन् । सानोमा फुटबलमा रुचि भएता पनि उनका बुवाले उनलाई फुटबलको सट्टा गितार किनिदिए अनि दाईले गितार सिकाईदिएका थिए । त्यसपछि नै उनी संगीतको यात्रामा सरिक भएका हुन् । औपचारिक रुपमा संगित नसिकेतापनि उनले अनलाईनबाट संगीत बारे धेरै कुराहरु सिकेका छन् । विभिन्न कभर गीत समेत गाएका नेशनले अहिलेसम्म आफ्नै गीतभने सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनी पोखराको ‘एमपी’ ब्याण्डमा आवद्ध छन् । उनले यसअघि नेपाल आईडलको दोस्रो सिजनमा समेत सहभागिता जनाएका थिए ।